Vagadziri Vagadziri - China Zvigadzirwa Suppliers, Fekitori
Otomatiki Nesting Solution
Z inoumbwa nesimbi isina girazi pasi pemahara waya mesh conveyor bhandi
Z Chimiro simbi isina waya waya mesh conveyor bhandi, girazi rakapatsanurwa dhiriya rinowanikwa mune dzakasiyana siyana zvigadzirwa, chiyero isainzi simbi 304. Zvimwe zvinowanikwa zvinosanganisira: simbi isina tsvina 316, yakasiyana kabhoni simbi, uye yakanyanya kupisa mashandiro anoita.
Metal sequin mesh inobata nema sequins mazhinji (ane matavi mana) uye mhete, inoratidzika sengepade, rimwe nerimwe 'gumbo' re sequin rinoshanda mune rin'i uye rakapetwa neshure pacharo kuchengetedza ivo vanobatana.
Aluminium yakawedzera simbi mesh
Aluminium Yakawedzera Metal Mesh inogadzirwa kubva kualuminium ndiro iyo yakafanana kurohwa / inotsvedza uye yakatambanudzwa, ichigadzira kuvhurika kwedhaimani / Rhombic (standard) chimiro. Kuwedzeredzwa, iyo aluminium mesh ndiro ichave mune chimiro kwenguva yakareba pasi pemamiriro akajairwa. Iyo dhizaini-rakaumbwa dhizaini uye dhayakuki anoita iyi mhando mesh grille yakasimba uye yakaoma. Yakawedzera mapaneru eAluminium anogona kuvezwa mune akasiyana ekuvhura mapatani (sengemuyero, inorema uye yakatetepa mhando). Yakasiyana-siyana yegeji, mavheji ekuvhura, zvishandiso uye masayizi emapepa inogadzirwa. Inzwa wakasununguka kutibata nesu kana uchifarira.
Simbi isina tambo yakashongedzwa kwenguva refu
High presion isina stainless simbi zvinokurumidza zvinosanganisirwa idenderedzwa resimbi neyekuvhurwa kune rimwe divi uye inogadzirwa kubva pamakumi matatu nemakumi matatu nenhatu kana makumi matatu nematanhatu simbi.Papo panobatana nzvimbo iyi, iwe unongokanda skeni munzvimbo panzvimbo yekuvhura kuti urambe wakavharwa.Iyo chinhu chikuru ndechekuti hachizosviba nekufamba kwenguva, kunyangwe mumhepo dzakanyorova. Kunyangwe vanowanzouya muhukuru pakati pe3,5mm kusvika 14mm, kana paine saizi yauri kutsvaga saka ndokumbirawo kubvunza isu sezvatingave tichikwanisa kuvapa.
Sekuda kwemafashoni mafashoni, zvakanyanya kusiana uye yakasarudzika keteni yekushongedza inokwezva ziso revanhu.
Iyi yakasarudzika keteni yekushongedza keteni yakavakwa ne 13mm hove yekubatanidza iyo aluminium hovha nyore kubatanidza pairi uye kubvisa. Heano mamwe emamwe ekushongedza keteni keteni yekureva.
Balustrde uye railing dziviriro isina Stainless simbi waya tambo mesh net
Stainless simbi balustrade tambo mambure yakanakira balustrade infill, senge stair balustrade, balcony balustrade uye ndima balustrade. Yakawedzera nzvimbo, kuwedzera kuitisa, kwakachengeteka kwakawanda, isina tambo yesimbi tambo meshase ekudzora matanho ekuvaka chivakwa chinopa kuchengetedzwa pamwe nekuve chinhu chekugadzira. Iyo inoshanduka-simbi isina waya waya tambo mesh's rhombus mesh ine yakanyatsochinja shanduko, ingangoita isingagadzike, inonyanya kurwisa uye inopwanya simba rinopesana, yakawanda inodzivirira mvura, chando uye dutu.
Stainless Simbi Ndege Aviary Mesh, Aviary Netting & Aviary Mesh Kune Shiri, huku, Parrots, Inonyanya kushandiswa ndeye Knotted Mesh, isina steel yakarukwa mesh, imhando yakajeka yesuka mesh yakagadzirwa nemaoko, yega warp waya tambo inoyambuka neimwe nzira kumusoro uye pazasi peya yeft waya tambo. Tambo dzeWarp uye weft isu kazhinji dzine dhayamita yakafanana.
Shumba yakavharira mesh
Shumba yakavharirwa mesh inowanzovakirwa kubva kune isina tsvina simbi ine muchero meshi kana inopindirana tambo mesh, inoshanduka-simbi isina waya waya waya tambo mesh, shumba uye tiger yekuvharisa mesh, Kuva nehupfumi uye zvakatipoteredza kushamwaridzana, nekuvhura yunifomu uye yakajeka kubuda, tambo mesh fenzi inogona kupa yakakwana mamiriro ekudyidzana evashanyi. Isu tisina tambo yesimbi tambo mesh inogadzira pano muChina, gadzira uye gadzira sosi dzakasiyana dzeshumba dzakavharirwa mesh nenzira.
Anti-kudonhedza Wire Rope Mesh, yakadonhedza zvinhu kudzivirira kuchengetedza mambure, yakagadzirirwa kudzivirira Yadonhedzwa chinhu chinhu uye kuita nzvimbo dzebasa zvakachengeteka. Kudonha kana kudonhedza tsaona kunoitika kana chimwe chinhu chikawa kubva mudenga uye chakonzera kukuvara kwemidziyo, kukuvara kana kufa.Izvi hazvisi kungotyisidzira kuchengetedzeka kwevashandi chete asiwo zvakakosha mumidziyo inokwanisa kukanganisa nzvimbo.